किन फर्कन्छन् कन्यामबाटै पर्यटक ? : RajdhaniDaily.com -
Home Not-to-be-missed किन फर्कन्छन् कन्यामबाटै पर्यटक ?
इलाम । झापाबाट इलाम पस्दा सवैभन्दा पहिला कन्याम आउने भएकाले पनि धेरैलाई जिल्लाको प्रमुख पर्यटकिय गन्तब्य कन्याम नै लाग्नु स्वाभाविक छ । चियावारीको जिल्ला इलाम, कन्याममा पनि ठुलो चियावारी । हेर्दा पनि हरियाली अनी सुन्दरताले कन्याम धेरै पर्यटकहरूको गन्तब्य बनेको छ । कन्याम इलामको सूर्योदय नगरपालिकामा पर्दछ । तर चियावारी कन्याममा मात्र छैन इलामको । इलाम नगरपालिका अर्थात जिल्ला सदरमकाम छेउमा रहेको चिया वगान सुन्दर र अनी मनमोहक छ ।
पर्यटकको रोजाइमा कन्याम पर्नु स्वभाविक पनि छ । झापासँग नजिक रहेकाले पनि यहाँ ३५ डिग्रीभन्दा बढी तापक्रम छल्न पनि १९ डिग्रीतापक्रम छल्न कन्याम आउने गरेका छन् । मानिसले सहजता खोज्नु, विलासिता बस्तुमा वढि मुल्य खर्च गर्नु स्वभाविक जस्तै बनेको छ । त्यसैले पनि झापा, मोरङका जिल्लामा गर्मी बढ्दा इलाम आउने पर्यटकहरूको संख्या वढ्दै गएको छ ।
झापाका नविन निरौला परिवार सहित केही दिन बस्ने गरि इलाम आए । छोराछोरीको छुट्टीको अवसर बनाएर इलाम आएका उनी र उनका परिवार इलाममा केही दिन बसे । तर उनीहरूले कन्याम र फिक्कल मात्र घुमेको बताए । इलाममा पनि चियावारी छ, इलामका अन्य स्थान पनि घुम्ने ठाउँ छन् भन्ने नै उनलाई थाहा छैन । उनले भने “इलाम भन्ने बित्तिकै कन्याम बुझिन्छ, यहाँ आउने बित्तिकै चियाबारी देख्न पाइन्छ,” इलाम भनेकै कन्याम बुझ्ने उनले इलाममा हेर्न लायकको कन्याम मात्र बुझेको बताए ।
३५ देखी ३८ डिग्रीभन्दा बढी तापक्रममा हुँदा दिउँसो सडकमा हिँड्न सक्ने अवस्था नहुने भएपछि उनी इलाममा चिसो खान आएका हुन् । गर्मीले जनजीवन प्रभावित हुने गरेको छ । बढि गर्मी भएपछि मानिस चिसो खान भएपनि नजिकै रहेको इलाम आउने गरेका छन् । झापाका विजय राई वढि गमी भएपछि इलाम आफन्तकामा आएर केही दिन बसे । उनले पनि छोराछोरी लिएर नै इलाम आएका थिए । केही दिन भएपनि शान्तगरि स्वास फेर्न पाएकोमा आफु र श्रीमती मात्र हैन छोरा छोरीलाई पनि आनन्द मिलेको उनी बताउँछन् । “केही दिन भएपनि शितल भयो झापा झरेपछि फेरी उही हुन्छ ।,”
यो पनि पढ्नुहोस अब इन्टरनेट बैंकिङबाट २० लाख भुक्तानी
उनले भने । तराईमा गर्मी वढेपछि नजिकै रहेको इलामको कन्याम र फिक्कलसम्म धेरै पर्यटकहरू आउने गरेका छन् । विशेष गरेर शनिबार यहाँ बढि पर्यटक आउने गरेका छन् । बाह्रै महिना पर्यटकहरूको घुइँचो लागे पनि गर्मीको समयमा पर्यटकको संख्या अझ दोब्बर बढी हुने गरेको छ । बाहिरबाट आएकाहरूलले कन्यामलाई पूर्वको स्वर्गको उपमा दिने गरेका छन् । दिउशो कन्याम र रात अन्तुमा बिताउने योजना बनाएर आउने पर्यटकहरूसमेत वढ्दै गएका छन् । सूर्योदय नगरपालिकाको कन्याम–अन्तु पर्यटकहरूको प्रमुख रोजाइ बन्ने गरेको छ ।
कन्याम क्षेत्रमा रहेको घोडा र नेपाली मौलिक पहिरनमा रमाउने पर्यटकहरूको कमी छैनन् । कन्यामको चिया बगानमा फोटो खिच्ने र घोडा चढ्ने काम पर्यटकहरूको प्रमुख आकर्षण हो । विभिन्न जातिय पहिरन लगाएर तस्विर कैद गर्ने पर्यटकहरू प्रसस्तै भेटिन्छन् यहाँ । ग्रामीण परिवेशमा घोडा चढ्नु नौलो नभए पनि सहरी परिवेशका तथा बाह्य पर्यटकहरूका लागि नौलो र आकर्षक काम बनेको छ । बाह्रै महिना पर्यटकको चाप हुने यस क्षेत्रलाई प्रदेश १ सरकारले सूर्योदय नगरपालिकालाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विस्तार गर्न खोजेको छ । प्रदेश सरकारले यसलाई पर्यटकिय नगरी भनेर घोषणा समेत गरेको छ ।
इलाममा कन्याम मात्रै होइन अरु पर्यटकिय क्षेत्रपनि कम छैनन तर बाहिरबाट आएका धेरै पर्यटकहरू इलाम आएर पनि कन्यामबाट नै फिर्ने गरेका छन् । इलाम चियावारी, पानीटार चियावारी र जिल्लाका अन्य स्थानमा रहेका चियावारी पर्यटकहरूका लागि उत्तिकै मनमोहक लाग्ने पर्यटन ब्यवसायीहरू बताउँछन् । इलाममा हेर्न र घुम्न लायकका अन्य वसतु, ठाउँ र स्थानहरू भैपनि कन्याम अनी चियाले मात्र चर्चा पाएको उनीहरूको भनाई छ । विश्व रामसार क्षेत्रमा सुचिकृत माइपोखरी, प्रदेश नम्वर एकको प्रमुख पर्यटकिय गन्तब्य मानिने सन्दकपुर र जिल्ला भित्र रहेका धार्मिक र पर्यटकिय स्थलहरूको समेत उत्तिकै चर्चित छन तर पनि पर्यटकहरूको भिड कन्याम बाटै फर्कने गर्छन ।
Not-to-be-missed राजधानी संवाददाता - March 4, 2021
Editor-Picks एजेन्सी - March 3, 2021
यादवराज जोशी - October 10, 2020
यो रात उनको याद कल्पनाका रापहरू तर चीसो स्पर्श एकमात्र यथार्थ
यो पनि पढ्नुहोस सुटुक्क बिहे गरेकी श्रेया घोषालले ‘बेबीबम्प’ सार्वजनिक गरिन्
यिनैबीच गुडुल्किँदै सुर्योदयको प्रतीक्षा मध्यान्हको तातोपन अनि त्यसलाई माथ गर्ने सिरेटो सिरेटो चिर्दै बढेका पाइला कुनै मोडमा ठिंग उभिँदा ठ्याक्कै बुख्याँचा वरिपरि न चिरबिर न कोलाहल केबल शून्यता शून्यता...
सरकारको आँकलन : साउन दोस्रो र तेस्रो साता कोरोना र वर्षाजन्य विपद्का घटना उत्कर्षमा
काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमणले आम जनता त्रस्त भइरहेका बेला सरकारले आगामी साउनमा कोरोना महामारी उत्कर्षमा पुग्ने आँकलन गरेको छ । साउनको दोस्रो र...
भर्खरै महेश्वर गौतम - May 28, 2020
बिचार भागवत खनाल - June 27, 2020
नागरिकता नागरिक हुनुको भाव या अवस्था हो । नागरिकता नागरिकले आफ्नो राष्ट्रप्रति बफादार रही कर्तव्यपालन गरेबापत प्राप्त हुने अधिकार हो । यो राज्य र...
बुद्धिबहादुर थापालाई ‘कोभिशिल्ड’ लगाएर कोरोनाबिरुद्धको खोपको शुभारम्भ
Breaking News विजय नेपाल - January 27, 2021
पोखरा । देशभर बुधबारदेखि सुरु कोरोना विरुद्धको खोप अभियानअन्तर्गत गण्डकीमा पनि सुरुवात भयो । गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरास्थित पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राडा...
प्रदेश १ राजधानी समाचारदाता - December 9, 2020
यो पनि पढ्नुहोस नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय २५ डलरले घट्यो